မြန်မာ ကင်းထောက် လူငယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေ | ဧရာဝတီ
မြန်မာ ကင်းထောက် လူငယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေ
ရန်ပိုင်| January 9, 2013 | Hits:1,300
12 | | တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်က ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည့် ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ကို ကလေးသူငယ်များ၏ စာရိတ္တနှင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်က မြန်မာလူငယ် ကင်းထောက် တံဆိပ် (ဓာတ်ပုံ – Wikipedia)
Scout ဟုခေါ်သော ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့မှာ “အစဉ်အသင့်” (Always Prepared) ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ အများပြည်သူကို ကူညီနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ကျောင်းသားလူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေး ကောင်စီ လက်ထက်မှ စစ်အစိုးရ လက်ထက်တိုင် နှစ် ၅၀ နီးပါးကြာ ဖျက်သိမ်းခံထားရသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ လူငယ်များကြား ပြည်သူနီတိနှင့် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံများ၊ စိတ်ဓာတ်နှင့် စာရိတ္တပိုင်း တိုးတက်စေရန်၊ ပြည်သူကို အကျိုးပြုနိုင်ရန် ကင်းထောက်အဖွဲ့ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်အစိုးရများ ဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးတို့၌ ပတ်သက်စေမည် မဟုတ်ကြောင်း ကင်းထောက်သင်တန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူနေသူ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးတင်ညိုက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူဖွဲ့တယ် ဆိုပေမယ့်၊ ဟိုတုန်းက မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီက ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်လမ်းလူငယ်၊ ရှေ့ဆောင်လူငယ်၊ တေဇလူငယ်တို့၊ နောက်ဒီဘက်ခေတ် ကြံခိုင်ရေး ပါတီဝင်ခိုင်းတာမျိုးနဲ့တော့ မတူဘူး” ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာ ကင်းထောက်အဖွဲ့ချုပ်၏ ကင်းထောက်သည် ဂုဏ်သိက္ခာကို စိတ်ချရသည်၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံး သုံးပါး ကြည်ဖြူသန့်ရှင်း ရ မည်ဆိုသော ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိသင့်သိထိုက်သည့် အချက်အလက်များ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ သူတပါးကို ကူညီနိုင်ရေး ထည့်သွင်းသင်ကြားသွားမည်ဟု ဦးတင်ညိုက ပြောသည်။
ကင်းထောက်ယူနီဖောင်းမှာ ကာကီအင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ လည်စည်းနီ၊ ကင်းထောက်တုတ်၊ ကတိသုံးပါးကို ဖော်ကျူးထားသည့် နိုင်ငံတကာ အမှတ်တံဆိပ်တို့ပင် ဖြစ်ပြီး ရှေးဦးသူနာပြုနည်း၊ ကြိုးချည်နည်း၊ တောစခန်းထွက်ခြင်း၊ စခန်းချနေထိုင်နည်း၊ သဘာဝကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းများကိုလည်း သင်ကြားပေးမည်ဟု သိရသည်။
အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အရွယ် အခြေခံပညာကျောင်းသားများကို မူတည်ကာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၁၈ ခုရှိ ကျောင်းပေါင်း ၁၈ ကျောင်းတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းမည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ ပညာရေးလောကတွင် ကျောင်းသားများမှာ အနားယူချိန်နည်းပါးကာ ကျောင်းသင်ခန်းစာဖြင့်သာ လုံးခြာလည်နေရပြီး မိဘများမှာလည်း စားဝတ်နေရေးကြောင့် သားသမီးများအား အချိန်ယူ ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ထို့အတွက် လှုပ်ရှားကစားရင်း ပညာယူနိုင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်း ဆရာကြီး ဦးတင်ညိုက ဆက်ပြောသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကင်းထောက်ပညာနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ကြွယ်ကလည်း ကင်းထောက်ဆိုသည်မှာ စစ်တပ်က ပို့ချသည့် ကင်းထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘဲ မျက်စိရှင်ခြင်း၊ ဖျတ်လတ်ခြင်း၊ သူတပါးကို ကူညီခြင်းဆိုသည့် အတတ်ပညာများသာ ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၉၀ တွင် ကင်းထောက် လူငယ်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားရာ ယခုအခါ သန်း ၃၀ ခန့် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကင်းထောက် အခေါ်အဝေါ်များမှာ အသက် ၈ နှစ်မှ ၁၂ နှစ် အရွယ်ကို ၀ံပုလွေ၊ ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အရွယ်ကို ကင်းထောက်၊ ၁၈ နှစ်ကျော်သူများကို လှည့်လည်သူ (Rover) ဟု ခေါ်ဆိုကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း ကာကီရောင်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတို၊ လည်စည်းနီဖြင့် ကင်းထောက် ကျောင်းသားများမှာ အလှည့်ကျ တောစခန်းထွက်ခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကြသည်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကင်းထောက် (Scout) အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာလူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်သာမက ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တချို့ကိုပါ ပူးတွဲတာဝန်ယူခဲ့သည်။
ဂျပန်ခေတ်တွင် ကင်းထောက်အဖွဲ့ ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီး လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သမ္မတကြီး စ၀်ရွှေသိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကင်းထောက်အဖွဲ့၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယကအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် ကိုယ်တိုင် ကင်းထောက်မင်းကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက်တွင် ကင်းထောက်အဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရသည်။
ကျောင်းမပြောင်းလို၍ တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား ၃၀၀ ကျော် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး တက္ကသိုလ် ဆရာများ သမဂ္ဂ ဦးဆောင်သူများ နယ်ဝေး ရွှေ့ခံရ
လူရည်ချွန် စီမံကိန်း ပြန်စ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Mann January 9, 2013 - 10:20 am	ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်
Reply	Sai Linyone January 9, 2013 - 10:49 am	Instead of forming scout style youth movement from above, the youths themselves better form it. The youth must be givenachance to explore it, learn from it and extend their capability for the betterment of the society.
Reply	sau gerald January 9, 2013 - 1:40 pm	ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာကောင်းမွန်သော..လုပ်ရပ်..လုပ်သင့်.လုပ်ထိုက်..ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့.အနာဂါတ်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်တင်မက..တိုင်းပြည်အတွက်ပါကောင်းမွန်အထောက်ကူဖြစ်နိုင်ပါ၍..နိုင်ငံတကာစံနှုံးနှင့်အညီအခိုင်အမာဖွဲ့စည်းပြီးပါက..နောက်တက်လာသောမည်သည့်အစိုးရက.ပါယ်ဖျက်လို့မရ..ပါယ်ဖျက်ခွင့်မရှိ..စသည့်ခိုင်မာသောဥပဒေတစ်ရပ်ကိုပါ..အတည်ပြုနိုင်ရန်ကိုလွတ်တော်တွင်တင်ပြ..အတည်ပြုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါကသိပ်ကောင်းပါမည်..၄င်းကင်းထောက်အဖွဲ့အတွက်ရံပုံငွေကိုနိုင်ငံတော်၏ဘာဏ္ဍာတော်မှခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ပြုသင့်သည့်အတွက်လည်းလွတ်တော်မှအတည်ပြုသုံးစွဲခွင့်ပြုသင့်ပါသည်..အနားယူသွားကြသော..ဗိုလ်ချုပ်ျွှူးကြီးနှင့်အဖွဲ့(၇၀)ကျော်တို့ရဲ့..အိမ်စေတွေ.ခြံစောင့်တွေနှင့်၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုအားလုံရဲ့အထောက်ပံ့ငွေတွေကို..နိုင်ငံတော်ကတောင်ခံယူဖို့.လွတ်တော်မှာတောင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သေးတာဘဲ..မို့လား…
ရှမ်းစာပေ သင်ကြားရေး ကြိုးပမ်းမှု ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့သလဲ (နိဂုံး)
ရှမ်းစာပေ သင်ကြားရေး ကြိုးပမ်းမှု ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့သလဲ (အပိုင်း – ၃)
ကျောင်းတွေမှာ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး၊ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး သင်ကြားဖို့လို
ရှမ်းစာပေသင်ကြားရေး ကြိုးပမ်းမှု ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့သလဲ (အပိုင်း – ၂)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ
ရှမ်းစာပေ သင်ကြားရေး ကြိုးပမ်းမှု ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့သလဲ